.: Things On the Little Earth :.
Things on the little earth
01:22 am - nice speech abt marriage
Some notes from Sunday Weddings' Speech.. right or wrong? Those married ppl can testify.. :)
1) Marriage needs3things to last long and successful
->Intimacy (physical intimacy , emotional intimacy & financial intimacy)
2) 3... C that form love triangle that affects marriage.
-> Character ( third party man or woman)
-> Career (career over family)
-> Children (children over spouse)
3) watch out Ego & Emo
-> wife to watch out her man's ego ( not to blame or disparage her husband in front of others or children)
-> husband to watch out his wife's emo ( to care whether she is happy or sad or emo)
01:19 am - Nice Quote that I learnt today
"When you are in control of your emotion, you are in peace. When you truly understand 'cause and effect', you can tolerate. When you truly love yourself, you can forgive everybody. When you master yourself, your own inertia is disappeared and you can create your own momentum. When you can discipline yourself, you can predict the future of you."
I can relate most of it to Buddhism's phisolophy...
Just need to practice. concept is there...
Tags: buddhism, personal development, way of life
11:06 am - The Eight Precepts
From : http://www.accesstoinsight.org/ptf/dhamma/sila/atthasila.html
02:28 pm - အမှတ်တမဲ့နောင်တ
စင်္ကာပူမှာတုန်းကတော့ အစေ့ခြွေထားတဲ့ butter corn တွေကိုပဲ သရေစာအဖြစ်စားနေကျ.. ပြောင်းဖူးကို ဗိုက်ဆာလို့စားတယ်ဆိုတာ မရှိဖူးဘူး .. နောက်ပြီး အခုလို အဖူးလိုက်ပြုတ်ထားတာလည်း မစားဖြစ်တာ ကြာပြီရော..ဒီနေ့ အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်း အတန်းမသွားခင် ဗိုက်ဆာတာနဲ့ အခုလိုအိမ်မှာ တခြားစားစရာလည်း မရှိ (မ၀ယ်ရသေးလို့) ၊ ရှိတဲ မနက်က ပြုတ်ထားတဲ့ပြောင်းဖူးပြုတ်စား ယင်း စာလုပ်နေတုန်း ရုတ်တရတ် မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုသွား သတိရမိတယ် ..
အဲဒါက နောက်ဆုံးတစ်ခေါက် ရန်ကုန်ပြန်တုန်းက ကလေးမလေးတစ်ယောက် ပြောင်းဖူး စားနေတဲ့ပုံလေး .. ဘာလို့နောင်တရမိလည်းဆိုတော့ ..
၂၀၀၆ ရန်ကုန်ပြန်တဲ့ အခေါက်က ရေကျော်ဈေးကို မေမေနဲ့ တစ်မနက်လိုက်သွားခဲ့တယ်။ မနက်နေခြည်ဖြာဖြာ အောက်မှာ လမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ ဈေးတန်းတွှေ၊ ဈေးဝယ် ဈေးသည်တွေနဲ့ မြင်ကွင်းက အတော့်ကို စည်းကားလှုပ်ရှားလို့။ ဈေးလည်းရောက်ရော.. ၁၀ နှစ် ၁၁ နှစ် အရွယ်၊ ခရေပန်း စံပယ်ပန်း ရောင်းနေတဲ ကလေးတွေတွေ့ရတာ စိတ်မကောင်းတော်တော်ဖြစ်မိတယ်။ ဒါနဲ့ မေမေ့ကို ဟိုပန်းလည်း ၀ယ်မယ် ဒီပန်းလည်း ၀ယ်မယ် ဆိုပြီး ပန်းတွေကို ဟိုကလေးဆီက နည်းနည်း ၊ဒီကလေးဆီက နည်းနည်း ၀ယ်နဲ့ မေမေက ဘုရားပန်းအိုးမဆန့်တော့ဘူးလို့ တားယူရတယ် .. မေမေက စာနာပြီး ပြောပါတယ် `..နေ့တိုင်းလည်း ၀ယ်နိုင်တာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ သမီးက အခုမှတွေ့လို့ အရမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ.. ဒါမျိုးက နေရေတကာမှာပါပဲ´ တဲ့ ..
ဒါနဲ့ ဟုတ်တော့လည်းဟုတ်တာပဲလို့ သူတို့ဘ၀တွေကို စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ တိတ်တိတ် စဉ်းစားယင်း မေမေ့နောက်က ခြင်းတောင်းဆွဲယင်း လိုက်ခဲ့တယ် ။ တစ်နေရာ အရောက် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ၀ယ်နေတုန်း ဘေးနားမှာ ပြောင်းဖူးပြုတ်တောင်းနဲ့ ဈေးရောင်းနေတဲ့ ၈နှစ်အရွယ်လောက် ကလေးမလေးကို ငေးနေမိတယ်။ ပြောင်းဖူးဗန်းအစွန်နားက ပြောင်းဖူးစေ့တွေကို ခဏခဏ ခိုးခိုးပြီးခြွေစား နေတာ။ တစ်စေ့နှစ်စေ့လောက် ဖဲ့လိုက် ပြောင်းဖူး ဖက်ကို ပြန်ဖုံးလိုက်၊ ပါးစပ်လှစ်ကနဲထည့် လိုက်နဲ့ ။ မေမေဈေးဝယ်လည်း ပြီးရော ဟင်းရွက်သည် အဒေါ်ကြီးက သူ့ခိုးစားနေတောတွေသွားပြီး ဆူပါလေရော၊ သူ့ အမေလား အဒေါ်လားတော့ မသိပါဘူး။ လက်ကလည်းကလေးမလေးခေါင်းကို ခေါက်ကလည်းပဲ.. လန့်ဖြန့်သွားတဲ့ ကလေးမလေးက လည်း ပြောင်းဖူးဗန်းကို တိုက်မိပြီး ငိုမဲ့မဲ့နဲ့ .. တော်သေးတယ် ဗန်း မမှောက်လို့ ..
အဖြစ်အပျက်ကို နောက် တစ်လှည့်လှည့်ကြည့်ယင်းနဲ့ပဲ ဒါမျိုးကဖြစ်တတ်ပါတယ်လေလို့တွေးပြီး မေမေ့နောက် ဆက်လိုက်ခဲ့တယ်။ မေမေကတော့ သူ့အာရုံနဲ့သူ သတိထားမိပုံမပေါ်ဘူး..
အဖြစ်အပျက်ကတော့ အဲဒါပါပဲ ..အဲဒီတုန်းကတော့ ကလေးမလေးခိုးစားလို့ အရိုက်ခံတာပဲလို့ တွေးမိပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရုံကလွဲလို့ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ပဲ ..အခု ပြောင်းဖူးစားယင်းနဲ့ စဉ်းစားမိတာက .. သူဗိုက်ဆာနေလို့လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလို့ ကိုယ်ချင်းစာမိတယ်.. အဲဒီတုန်း သူ့အရိုက်မခံရယ င် အဲဒီပြောင်းဖူးဝယ်ပြီးသူ့ကို ပြန်ကျွေးလိုက်ရကောင်းသားလို့ အခုမှတွေးမိတယ် .. ငါဘာလို့ အဲဒီတုန်းက မစဉ်းစားမိပါလိမ့်နော် ..သူလည်း အနည်းဆုံး တစ်မနက်တော့ ဗိုက်မဆာတော့ဘူးပေါ့. နောက်ပြီး အနည်းဆုံးတော့ ခိုးမစားရဘူးပေါ့နော် ..တွေးမိတာပါ..
.. ဒါပါပဲ ..တစ်ခါတစ်လေ ..အမှတ်တမဲ့ ကိစ္စလေး တွေ ကတွေးစရာပေါ်လာတတ်တယ် ..
ဖေမြင့်ရဲ့ နှလုံးသားအာဟာရ (Chicken Soup ဘာသာပြန်) စာအုပ် ထဲက သောင်ပေါ်တင်ကျန်ခဲ့တဲ့ကြယ်ငါးတွေကို ပင်လယ်ထဲပြန်ပစ်ထည့်ပေးတဲ့သူ ပြောတဲ့စကားကို လည်း သတိရမိတယ်
ဖတ်ဖူးတဲ့သူတွေတော့သိပါလိမ့်မယ်.. မြန်မာပြည်က ကြယ်ငါးလေးတွေ သောင်ပြင်ပေါ်မှာ အများကြီးပဲ..
07:44 pm - My Photoshop Exercise 2
Which one is original and which one is my touch? It's pretty easy to tell , isn't it? hehe :D
10:48 pm - Senseless Special Edition: Student Life
Translated from the Chinese original by the very kawaii Yue, reformatted by me.
This is dedicated to all the hard working students out there. And bunnies.
starringabunch of confused bunny…people…things
2 days before the final
Now how’s that for an educational experience? Of course, this is NOTHING like my academic life at all. No, really, it isn’t.
*crawls back towards books withagroan*
credit to http://www.worryvsdonuts.com/?p=82#comment-292
06:57 am - ဖတ်မိဖူးသောရှေးဟောင်းမြန်မာကျောက်စာများ
ကျောက်စာတွေအကြောင်း ..တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် ဖတ်ဖူးတာဆိုလို့ ဆယ်တန်းမြန်မာ စကားပြေလက်ရွေးစင် ဖတ်စာအုပ်ထဲ က ရာဇကုမာရ် ကျောက်စာ၊ သိင်္ဂသူ့သမီးကျောက်စာ နဲ့ မိဖုရားဖွားစောရဲ့ ကျောက်စာ သုံးချပ်ရယ်ပါ .. လွန်ခဲ့တဲ့ ရ နှစ် ၈နှစ်လောက်က ဆိုတော့ စာတွေ အတိအကျကိုတော့ မမှတ်မိတော့ပေမယ့် ရင်ထဲမှာ တော့ အဲဒီကျောက်စာတွေထဲက တချို့ အကြောင်းအရာလေးတွေ ခုထိကျန်နေဆဲ..<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
ကျောက်စာတွေကလည်း ဒီခေတ် blog တွေလိုပါပဲ စာတွေကတဆင့် ရေးသူရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ ခံယူချက်တွေကို မျှဝေခံစားရပါတယ် .. သိင်္ဂသူ့သမီး၊ မိဖုရားဖွားစော နဲ့ ရာဇကုမာရ်တို့လည်း ဒီခေတ်မှာသာဆိုယင် ကိုယ်ပိုင် blog တွေကိုယ်စီ ရှိကြမလားမသိဘူး.. အိတို့လည်း အရင်ခေတ်သာဆို ရေးချင်သမျှတွေ ကျောက်စာမှာ ထွင်းနေရတာနဲ့ တင် ပြီးမှာ မဟုတ်တော့ဘူး.. ကိုယ် ဖတ်ချင်တဲ့သူရဲ့ ကျောက်စာတွေကိုလည်း DHL တို့ FedEx တို့နဲ့ ဈေးကြီးပေးပြီး မှာရမလားမသိ..
ခုနက ကျောက်စာသုံးချပ်အကြောင်း မှတ်မိသလောက် ပြန်ဆက်ရယင်.. အဲဒီကျောက်စာတွေက သူ့တို့ အလှုအကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ ..အကြမ်းဖျဉ်း သုံးပိုင်းပါလေ့ရှိတယ် .. အလှုအကြောင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဆုတောင်းပါ ..တစ်ချို့တော်တော်များများ မှာတော့ ဆုတောင်းနဲ့အတူ ကျိန်စာပါ ပါတယ် (ဆယ်တန်းမှာ အဲဒီသင်ရိုးနဲ့ကြုံတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းဖတ်ဖူးမှာပါ)
အကြိုက်ဆုံးကတော့ သိင်္ဂသူ့သမီးရဲ့ ကျောက်စာပါ ..
“ အချင်းချင်း အမျက်အဤတစေ့မရှိ ချစ်သောမျက်စိဖြင့်ရှုကြစေလိုသတည်း”
ဆိုတဲ့ စကားလေးကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲ .. လူအချင်းချင်း ချစ်ခင်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ဖို့က ထင်သလောက်မလွယ်ဘူးနော်.. ကိုယ့်ကို ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တဲ့သူ ..မကောင်းကြံတဲ့သူ မဆိုထားနဲ့ .. တချို့သူတွေက ကိုယ်နဲ့ မသွင်မတူ မမြင်မတူယင် မကြိုက်ကြဘူး ..
တစ်ချို့တွေကြတော့ ကိုယ့်လောက်မတော်ယင် အရည်အချင်းမရှိယင် မချမ်းသာယင် ..ဂုဏ်မရှိယင် သူကဘာမို့လို့လဲ ငါကတော့ ဘာပဲ ဆိုတဲ့စိတ် အယင်ဆုံးဝင်လာတတ်ကြတယ် .. တစ်ချို့ကြတော့လည်းအောင်မြင် ချမ်းသာ လှပတဲ့သူတွေကို ဘလိုင်းကြီး အမြင်ကတ်ကြပြန်ရော ..
ဒီလိုလောကကြီးထဲမှာ .. သူ့ရဲ့ကျောက်စာကိုဖတ်ပြီး သူ့ရဲ့ ရောင့်ရဲ အေးချမ်းတဲ့ မေတ္တာစိတ်ထားကို အားကျလေးစားမိတယ် .. သူရဲ့ ကျောက်စာထဲမှာသူများတွေလိုကျိန်စာ တိုက်ထားတာလဲမပါဘူး.. ခမ်းနားမြင့်မြတ်မှုတွေကို တောင်းဆိုထားတာလည်း မပါဘူး ..
“ လူဖြစ်လျှင်လည်း လူတကာထက် သာသော မြတ်သော .. နတ်ဖြစ်လျှင်လည်းနတ်တကာတို့ထက်သာသောမြတ်သော ..လှသော၊ ချမ်းသာကြီးသော..”
အစရှိတဲ့ဆုတောင်းထက်စာယင် သူရဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ဆုတောင်းလေးကို ပိုနှစ်သက်မိတယ် ..
မိဖုရားဖွားစောကို မကောင်းဘူးလို့ ပြောတာတော့ မဟုတ်ဘူး ..သူ့နေရာမှာ ကိုယ်သာဆိုလည်း အဲဒီလိုဆုတောင်းမိမလားမသိ.. မိဖုရားဖွားစောက အဲဒီခေတ်က လူတန်းစားအားလုံးတဲ့ အမြင့်ဆုံး ဖြစ်တဲ့ နန်းတွင်းသူလည်းဖြစ်ရတယ် .. မိန်းမသားတွေအတွက် အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ မိဖုရား လည်းဖြစ်ရတော့ သူ့ဘ၀ကို နှစ်သက်ပြီး အဲဒီလိုမျိုးဘ၀ကိုပဲ သူပြန်လိုချင်မိမှာပဲနော် ..
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ရဲ့ကျောက်စာတွေဖတ်ပြီး ဒီနှစ်ယောက်လုံးဆီက တစ်မျိုးစီတွေးစရာ …သင်ယူစရာ ရတယ်ထင်မိတာပါပဲ…
07:49 pm - An appeal to the UN Security Council to protect the people of Burma
plz read it and sign only when u wish to..
10:36 pm - မှီပါသေးတယ်နော် ...
သမီး အခုနေ ပြုပြင်ယင် မှီပါသေးတယ်နော် ...
ကုန်သွားတဲ့အချိန်တွေရယ် . . မရေမရာနဲ့ မြောလွင့် ..
မနားတမ်းလိုက်တတ်တဲ့ deadline တွေရဲ့ ခံတွင်းဝ ရှေ့ …
အကြိမ်ကြိမ် ချော်လဲလို့ .. တည်းတည်းလွတ်ရုံ ဒရောသောပါး ပြေးနေ ခဲ့တယ် …
အပြုံးတော့ မပျက်ခဲ့ပါဘူး .. မီးခိုးငွေ့တွေ .. သူများတွေကို မ မွှန်စေ ချင်ပါဘူး ..
လောလောဆယ် ဦးတည်ချက်ရှိရက်နဲ့ လမ်းပျောက်
a sociable loner တစ်ယောက် ..
ဒါပေမယ့် ဖြစ်ပါတယ် ..
ဒီလိုပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်တည့်မတ်ယင်း
ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမှာပေါ့ . ဟုတ်တယ်ဟုတ် .. အရင်တုန်းကလည်း ဒီလိုပဲ လျှောက်ခဲ့တာပဲလေ ..
`လူတွေသည် ကိုယ်စိုက်တဲ့မျိုးစေ့၏ ကောက်ပင်ကို တစ်နေ့ရိတ်သိမ်းရ၏။´
`မိမိပြုသည့်ကံ၏ အကျိုးကို မိမိသာ ခံစားရ၏´
`All beings are owners of their karma.’
သမီးရဲ့ လေလွင့်လျော့ရဲ နေတဲ့ စိတ်တွေကို တတ်နိုင်သမျှ ပြန်စုစည်းပြီး ရှေ့ဆက် ဖို့ကြိုးစားမှာပါ ..
07:45 pm - ကိုမျိုးချစ်ရဲ့မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများသို့ ပန်ကြားခြင်း
အိ အထက်က စာကို မအိမ့်ရဲ့ သံစဉ်မဲ့အင်္လကာမှ တဆင့်ကူးယူထားခြင်းပါ .. ဆန္ဒနဲ့ ဆုတောင်းကတော့ မအိမ့်နဲ့ တထပ်တည်းပါပဲ..